သမုဒ္ဒရာများပူနွေးလာမှုသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ၁၃% ပိုမိုမြင့်မားသည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
သမုဒ္ဒရာများပူနွေးလာမှုသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ၁၃% ပိုမိုများပြားသည်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများကိုရည်ရွယ်ချက်များစွာအတွက်အသုံးပြုနေကြပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသော်လည်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ကိုလေထဲသို့ပေါင်းထည့်ခြင်း၏မလိုချင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။ ဒါကြောင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှစ၍ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာ အရာကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအရှိန်မြှင့်စေခဲ့သည်။
သမုဒ္ဒရာများသည်အပူချိန်အားလုံး၏ ၉၀% ကျော်ကိုစုပ်ယူသည်, မလွှဲမရှောင်, သူတို့ထဲကသောဘဝများစွာပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
'Science Advances' ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ သမုဒ္ဒရာ၏ပူနွေးလာမှုသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ၁၃% ပိုမိုမြင့်မားပြီးဆက်လက်အရှိန်မြှင့်နေသည်။ ထိုနိဂုံးချုပ်အားဖြင့်သူတို့သည်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိတက်။ အလိုအလျောက်ကျသွားသောရေပေါ်မျောများဖြစ်သော Argo flotation system ကို အသုံးပြု၍ အပူချိန်မီတာ ၂၀၀၀ အနက်ရှိအပူချိန်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ တင်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကဒီဒေတာတွေကိုဂြိုလ်တုတွေဆီကြိုးမဲ့စနစ်နဲ့ပို့ပေးတယ်။
အပူချိန်တိုင်းတာမှုများကိုကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များမှတွက်ချက်သောရလဒ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်မကြာသေးမီကအပူချိန်ဒေတာများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်ပူနွေးနှုန်းသည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်ကထက်နှစ်ဆမြင့်တက်ကြောင်းသိရှိခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသမုဒ္ဒရာပူနွေးလာမှုသည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်နေသည်.
သုတေသီများတွေ့ရှိချက်အရတောင်ဘက်သမုဒ္ဒရာများသည်အလွန်ပူနွေးလာပြီးအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာများသည်မကြာသေးမီကဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့တိုင်၊ အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်လာလိမ့်မည်.
အထူးသဖြင့်သမုဒ္ဒရာ၏ဖြစ်ရပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျိုးဆက်များကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ သန္တာကျောက်တန်းများအရောင်ချွတ်နေကြသည်, လူ ဦး ရေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်လျော့ကျသွားသည်။နှင့် ပျားများကြီးထွားစပြုလာပြီဖြစ်သောရေတိမ်ကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်အချို့ရှိသည်.
လေ့လာမှုအပြည့်အစုံကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် ဒီမှာ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » သမုဒ္ဒရာများပူနွေးလာမှုသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ၁၃% ပိုမိုများပြားသည်
အပူချိန်ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုတိုင်းတာသလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ။